China Humidifier Oil, Humidifier Hotel, Mpamatsy Humidifier
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Description:Humidifier solika,Hotel Humidifier,Room Humidifier,Mpanome trano rehetra,,
Home > Products > Hotel Humidifier
Ny vokatra avy amin'ny Hotel Humidifier , mpanofana manokana avy any Shina, Humidifier solika , Hotel Humidifier mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Room Humidifier R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Humidifier mangatsiatsiaka miaraka amin'ny fonony mazava mangina
Angam-pandehanana mandehandeha azo idirana mafana ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny
Zava-baravarankely amin'ny fanamoriana an'habakabaka avo sy mpanamory
Tariby fitaratra goavam-panadin-drivotra manokana amin'ny fitaterana rivotra
Lehibe Capacity Ultrasonic Humidifier Cool Mist
Ball Shape 200ml Glass fitaratra matevina kely
Walmart nitondra hazavana Aroma diffuser Ary Humidifier
Ny haingon-trano avo lenta maharary mampihena aroma Air Humidifier
Target Aromatherapy Cool Mist Humidifier ho an'ny zazakely
Ultrasonic Aroma diffuser ho an'i Kuwait Pakistan New Zealand
220ml Ny vidin'ny vidy mora indrindra momba ny Humidifier Aromaterapy
Sivana fitaratra Humidifier fitaratra misy loko
Tsy misy menaka leakantika milamina tsy misy dikany
Fangaro menaka mangatsiaka mangatsiaka miaraka amin'ny hazavana mafana
Tsy misy Noise Aroma tena mila menaka fanaparitahana ny rivotra
Glass vera mamirapiratra fitehirizana Aroma menaka fanalefahana ary Humidifier
Mihazakazaka 5 Ora lehibe tarehy menaka manitra marefo mahafinaritra
Plug Mini Mini amin'ny fofona fofona manitra
Humidifier mangatsiatsiaka miaraka amin'ny fonony mazava mangina Fangaro menaka manitra miaraka amin'ny menaka manan-danja: DITUO dikan-dahatsoratra vaovao tena ilaina amin'ny menaka oliva misy menaka ilaina amin'ny menaka. Taranaka faha-2: Ny diffuser ultrasonic ultrasonic 2 dia miteraka fona mihoatra...
Angam-pandehanana mandehandeha azo idirana mafana ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny Loko miloko 7 Ny humidifier dia natao hivezivezy amin'ny hamandoana manerana ny faritra lehibe. Ampidiro fotsiny amin'ny outlet out ary io molony mangina-beny io dia manampy hamandoana mampitony ny manodidina anao. Ny...
Zava-baravarankely amin'ny fanamoriana an'habakabaka avo sy mpanamory Ity diffuser voa-kitay hazo ity dia manana fahana 700 ml hanaparitahana ny menaka tena tianao amin'ny Aromaterapy ary hamandoana ny efitranonao mandritra ny 20 ora. Apetaho ny bokotra fanamarinana mandritra ny 1, 3 na 6 ora na hitohy....
DC 5V Air Innovations Cool Mist Air Humidifier Famolavolana tsy manam-paharoa sy miraikitra: Ny famolavolana kely dia mahatonga ny humidifier diffuser avo lenta, mijery tsara tarehy, haingo mahafinaritra ho an'ny tranonao, birao, hotely izany. Ary ny serasera usb dia mahatonga anao ho afa-po amin'ny tenanao...
Tariby fitaratra goavam-panadin-drivotra manokana amin'ny fitaterana rivotra [Famolavolana kapila tokana] Ny famoronana fitaratra dia aseho ho an'ny fampisehoana mahafinaritra ary mifanaraka amin'ny haingo rehetra. Io menaka fanaparitahana menaka io ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny, trano, trano...
Lehibe Capacity Ultrasonic Humidifier Cool Mist Ultrasonus diffuser no nanamboatra ny teknolojia ultrasonic efa mandroso, ity menaka manan-danja ity dia milamina tsy misy feo manelingelina izay tsy hanelingelina anao rehefa matory na any am-piasana. Fiasa auto-off dia manome fiadanam-po ianao rehefa mampiasa ny hazo...
Model No.: DT-1506
Humidifiers Humidifier Huminifier Humidifier ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny D PORTABLE AROMA DIFFUSER】: Kely kely sy mora entina io menaka manitra io. Azo apetraka ao amin'ny efitrano, birao birao na zorony, ahafahanao mankafy mora kokoa ny dia amin'ny dia manitra. Ary ny fahafahan'ny 100ml dia...
Model No.: 1822Q
Ball Shape 200ml Glass fitaratra matevina kely Ny fananganana kalitao sy ny fikojakojana ambany dia mahatonga ny hanitra fofona ity safidy ity ho an'ny fifindrana, trano, birao, fianarana, sehatra fisaintsainana sy toerana fisaintsainana, efitrano fitadiavana, studio yoga, lakozia, efitrano fandraisam-bahiny,...
Walmart nitondra hazavana Aroma diffuser Ary Humidifier Manadio ny rivotra izay fofonainao sy ny fianakavianao miaraka amin'ity LED Aroma Oil diffuser & Ultrasonic Humidifier ity. Mety amin'ny toerany na aiza na aiza ao an-trano fa mety amin'ny efitrano fatoriany, ity humidifier amin'ny hotely...
Ny haingon-trano avo lenta maharary mampihena aroma Air Humidifier Ny humidifier rivotra dia mamorona tontolo iainana ara-pahasalamana kokoa ho anao sy ny olon-tianao; Ny soritr'aretin'ny allergy sy ny hatsiaka ary fenoy ny rivotra miaraka amin'ny hamandoana mba hiarovana tsara ny hoditrao ary na ny fanaka...
Target Aromatherapy Cool Mist Humidifier ho an'ny zazakely Natsangana Famenoana 200ml: Haingam-pandeha, namboarina namboarina tamin'ny fitoeran-jiro lehibe kokoa, ity diffuser fitaratra ity dia miantoka fotoana maharitra kokoa. Whisper Quiet: Matory tsara miaraka amin'ny DITUO somary mangina sy malefaka...
Ultrasonic Aroma diffuser ho an'i Kuwait Pakistan New Zealand [Fampitana menaka manara-dàlana marobe] Aromaterapy mpanefa ny menaka manitra, fanalefahana mangatsiaka, jiro amin'ny alina. Haingo fanaka efitrano tsara tarehy koa. Multifunction: mamontsina ny hoditra, mando rivotra, manamafy ny tsy...
220ml Ny vidin'ny vidy mora indrindra momba ny Humidifier Aromaterapy COOL MIST HUMIDIFIER - Mitahiry ny fahasalamana azo avy amin'ny menaka ilaina. Ny diloilo tena ilaina indrindra dia ny 220ml. TIMER - Miorina amin'ny "ON / 3H / 6H" timer fanamainam-pirinty fanamandoana ultrasonic humidifier,...
Sivana fitaratra Humidifier fitaratra misy loko [Teknolojia Advanced] Mampiasa ny teknolojia ultrasonic ho an'ny fanamboarana atomika tsara kokoa hanadio ny rivotra sy hanamando kokoa ny rivotra hanaparitaka ny fofona any amin'ny faritra lehibe kokoa. Mandritra izany fotoana izany, ny diffuser ultrasonic dia...
Fonosana: Boaty anatiny: 170 * 170 * 128mm; Carton master: 525 * 355 * 276mm / 12pcs
Tsy misy menaka leakantika milamina tsy misy dikany Mafy sy matory tontolo: Mihoatra ny 300 ml, ny diffuser ultrasonic dia azo ampiasaina ho toy ny fanamandoana mangatsiatsiaka mba hampidirany ny halatra hita maso ary maharitra mandritra ny 8 ora. BPA Free & Waterless tsy mandeha ho azy: Fitaovana fiarovana azo...
Fonosana: Boaty anatiny: 170 * 170 * 95mm ary Master baoritra: 525 * 355 * 400mm / 24pcs
Humidifier Air Ultrasonic Aromatherapy Cool Mist Humidifiers Rivotra mangatsiaka sy trano mamy no manatsara ny fahasalamanao sy ny ankohonanao. Aroma diffusers (antsoina koa hoe freshener air) mameno ny efitranonao amin'ny fofona mahafinaritra mahafinaritra sy mahafinaritra. Ny fofona manitra dia miasa tsara,...
Fangaro menaka mangatsiaka mangatsiaka miaraka amin'ny hazavana mafana Hamirapiratra ny tranonao miaraka amin'ny Ultrasonic Aroma diffuser. Misafidiana eo anelanelan'ny loko fotsy mba hifanaraka amin'ny haingon-trano na raha toa ny fikatsahanao hanampy ny loko miloko ny varimbazaha dia azo antoka fa...
Fonosana: Boaty anatiny: 120 * 120 * 245mm ary carton Master: 495 * 375 * 510mm / 24pcs
Tsy misy Noise Aroma tena mila menaka fanaparitahana ny rivotra Mba hiainanao ny fialan-tsasatra amin'ny faran'izay tsara indrindra, dia manome soso-kevitra ny hampiasana ny fofona manitra ao an-trano miaraka amin'ny menaka tena tianao ianao izay mahomby amin'ny fofona tsara ao an-tokantranonao sy ny...
Fonosana: Boaty anatiny: 205 * 195 * 115mm; Carton master: 60 * 42.5 * 25cm / 12PCS
Glass vera mamirapiratra fitehirizana Aroma menaka fanalefahana ary Humidifier Atodiho ho any amin'ny toerana mahasorena ny efitrano misy ny 100 ml Ultrasonic Humidifier sy ny jiro amin'ny alina amin'ny alàlan'i Dituo. Ity kamiao misavovona manitra ity dia vita amin'ny fitaovana PP, izany dia azo...
Mihazakazaka 5 Ora lehibe tarehy menaka manitra marefo mahafinaritra Tongasoa am-baravarana manitra fofona mahafinaritra ao an-tranonao miaraka amin'ny DITUO Essential Oil diffuser, masinina miendrika zava-manitra izay mamoaka ny fofona manitra ao anatin'ny minitra. Afa-po manokana ampiasaina miaraka...
Fonosana: Boaty anatiny: 127 * 127 * 195mm; Carton master: 540 * 405 * 410mm / 24PCS
Plug Mini Mini amin'ny fofona fofona manitra Miezaha mafy handoka ny tenanao amin'ny tombony rehetra amin'ny menaka manan-danja ao anaty plastika iray tsara tarehy sy tsara tarehy. Ny fametrahana tonga lafatra amin'ny akanjo vita amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mba hanamafisana anao sy ny...
Shina Hotel Humidifier mpamatsy
Ny Hotel Humidifier dia mitondra fahatsapana rivotra madio ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny, indrindra amin'ny ririnina.
Ny vahiny ao amin'ny hotely dia manantena fa ny mari-pana sy ny hamandoana ao amin'ny efitranon'ny hotely, ny faritra filomanosana ary ny spa ho amin'ny sehatra mahasalama sy mahasalama. Ny haavon'ny habetsaky ny hamandoana havanana mandritra ny vanim-potoana mafana dia manatsara ny fahasalaman'ny vahiny. Ny halalin'ny havanana eo anelanelan'ny 40 sy 60% RH dia midika hoe toetrandro anatiny tsara.
Mandritra ny vanin-taona mafana amin'ny ririnina, ny hamandoana havanana matetika dia ambany 30%. Ny habetsaky ny hamandoana ambany dia misy fiantraikany amin'ny fahasalamana sy fahasalamana ho an'ny vahiny. Raha tsy misy hamandoana dia mihamitombo ny fidiran'ny aretina sy ny aretina.
Ny antony: aerosol misy otrikaretina dia mijanona maharitra ao anaty rivotra kokoa raha ambany ny hamandoana, mampitombo ny risika amin'ny fifindrana, ary ny orona maina, ny tenda ary ny hoditra dia midika fa mihena ny fanoherana voajanahary amin'ny vatana.
DITUO Oil Humidifier dia matetika ampiasaina amin'ny fampiakarana ny hamandoana anatiny, na ny haavon'ny hamandoana ao anaty rivotra. Ampiasaina amin'ny volana ririnina, noho ny rafi-panafody anatiny sy ny hatsiaka mangatsiaka dia mitarika ny haavo ambany hamandoana. Ny fampiasana humidifier amin'ny efitrano amin'ireto volana mafana ireto dia mety hahasoa betsaka ny fahasalamana. DITUO ny mpandoto trano rehetra dia manampy amin'ny fampihenana ny hoditra maina sy ny molotra / maina maina mandritra ny volana ririnina.
Mpanome trano rehetra